I-MCSA eqinisekisiweyo yoBugcisa - Imibuzo yoPhuculo neempendulo | IYO
I-MCSA eqinisekisiweyo yoBugcisa - Imibuzo yoPhulo neempendulo
UMicrosoft unikezela izatifikethi ezininzi ezigqwesileyo ezivela kwi-Microsoft Certified Solutions Associate okanye i-MCSA isitifiketi ekuqeqeshelweyo kwiimpawu ezibalulekileyo ukuphelisa igunya elibonakalayo le-PC okanye umphathi weekhompyutheni ze-PC. Phanda imibuzo edibeneyo yeyona nto inokuthi ifunwe kwi-MCSA.
1. Iyiphi inxalenye yesicelo?
I: Izahlulo zesicelo zikhompyuthela zeprojekiti eziphinda ziphinde zenziwe kubalawuli beendawo. Ezi ziqendu zeComputer Directory. Abalawuli bezithuba ezibandakanyiweyo kwinkqubo yeepakethi zerejista banokuzaliswa kwelo candelo. Iimpawu kunye neempawu zokusetyenziswa kwezibonelelo zinganciphisa ukunyuswa kokuphindaphinda. Izicwangciso zesicelo zingagxininisa kwisithuba esinye kwisithuba sendawo kungekhona nakwimigangatho yecandelo lolawulo. Oku kwenza ukuba kufinyeleleke kunye nokugqitha.
2. Yiyiphi indawo yenkcazelo ye-Active Directory?
A: I-database ye-Active Directory isuswa kwibalawuli beendawo kwaye ifikeleleke kwizicelo zenethiwekhi. Zonke iindawo zingaba ngabalawuli beendawo kunye nokugcina i-Active Directory database kwi C: \_ windows \_ Ntds \_ Ntds.dit
3. Ziziphi iimpawu ezintsha ezinikezwa kwi-Active Directory kwi-Windows server 2008?
A: Funda nje umlawuli wendawo kunye noMgaqo-nkqubo wePhasiwedi weGoogle Grain
4. Yintoni i-Windows Server Backup?
A: I-Windows Server Backup yinto ekhutshwe kwi-Windows 2008 enika izixazululo ezahlukahlukeneyo ekuhlahleni ulwazi kwi-PC yakho ukuba kukho imfuneko yokudumazeka okanye nayiphi na into. I-Backup Yeseva yeWindows inokomeleza iirekhodi ezimbini kwi-server yonke. Ukomelezwa kweseva kufikeleleka kumigca yolawulo kunye nokuqinisekiswa kolawulo.
5. Yintoni edlula kwiidiski?
An: Ukudlula kwi-disc yindawo ephambili yokusebenzisa i-circles kwaye inesigqeba soqhagamshelwano kunye nesiseko soxwebhu.
6. Ziziphi iimoto zokuqhuba?
Izixhobo zokuhamba zihlukeneyo kwaye ziphezulu kunezinto ezizenzekelayo kwimisebenzi yazo. Abayikukopisha enye inkqubo ukuba, njengokuba kunjalo, yenze enye i-gadget eyinkimbinkimbi yeehadi kwizinga elithile.
7. Yintoni i-desktop yokwenza
I-Desktop yokwenza ubuchule yindlela ecacileyo yokukhupha nokukhupha i-OS okanye isakhelo esivela kumthengi olungele ukuyifumana. Kukho iintlobo ezininzi zeefowuni ezenziweyo ezinye zazo ezibandakanya iimashini ezibonakalayo ngelixa abanye bengenalo. Kwimeko apho isakhelo sokusebenza silawulwa ngasese, abathengi kufuneka bafikelele kwideskithophu zabo ngokusebenzisa inethwekhi ebonakalisa iindibano ezibonisa kude. Ukulungiselela i-desktop virtualization kwenziwa kwifama yeseva. Kule miqolo, izicelo ezifana nezibhebhe ziyakwazi ukudibanisa umshini we-Host. Umshini ogqithisileyo unokufikelela kumntu kwaye unokulungiswa ngendlela efuna ngayo. Le yindlela eyaziwa kakhulu kwaye elula kakhulu yokufikelela kunye nokusebenzisa i-desktop virtualization.
8. Iyintoni isilondolozo segatsha?
I-BranchCache ™ ihloselwe ukuphucula ukuphendula kwesicelo nokunciphisa ukusetyenziswa kokuxhumeka kwe-WAN ukwenzela ukuba iinkonzo zifikelele kwiindawo ezikude ngokufanelekileyo. I-PC eyikude isebenzisa i-cache yolwazi olugcinwe ngaphakathi ukuba linciphise ukunyakaza kwi-LAN. I-cache ingasuswa kumncedisi kwisebe (Imodi yeCache ehleliweyo) okanye inokubekwa eceleni kwiikhomputha zabathengi (Imodi yeCache ekwabiweyo).
9. Yiyiphi i-Access Access ngqo?
Ukufikelela ngokukhawuleza kunika abaxhasi ithuba lokufikelela kwiiwebhsayithi, izicelo kunye neengxenye zedokethi yenethiwekhi yangaphakathi ngokukhuselekileyo ngaphandle komfuno wokubambisana kunye nenethiwekhi yecala yangasese (VPN). Intanethi yangaphakathi ikwabizwa ngokuba yintanethi yangasese okanye i-intranet. Njalo ixesha i-PC eFikelelekileyo yokuFikelela i-Intanethi isebenzisana ne-intanethi, kungakhathaliseki ukuba kungenzeka ukuba oku kwenzeka ngaphambi kokuba uphawu lwabaxhasi lufikelele, uFikelelo oluPhezulu lubeka uxhumano lwe-bi-direction kunye nenethiwekhi yangaphakathi. Abaxhasi akudingeki ukuba baqwalasele ukusebenzisana ne-intranethi. Iikhomputha ezikude ziyakwazi ukujongana ngaphandle kwendawo yokusebenzela ngabalawuli be-IT, nangona kunjalo xa iikhomputha zingahambelani neVPN.
10. Yintoni i-DAC?
Ulawulo lwe-Microsoft Dynamic Access Control okanye i-DAC yilezixhobo zokusebenza zokulawula ulwazi kwi-Windows Server 2012 evumela abalawuli ukulawula izilungiselelo zokufikelela. Isebenzisa iindlela ezigxininisiweyo zokuvumela abalawuli ukuba bahlole ukuba ngubani oza kwiirekhodi ezingamanye. Amadokhumenti anokuhlalwa ngokwasemzimbeni okanye ngokwemvelo.
I-PMP eQinisekisiweyo yoPhando lweeNgxoxo
Isikhokelo esigqibeleleyo seCMS 2016 Certification